Muxuu ka yiri Mourinho guul daradii xanuunka badnayd ee caawa dhabarka loo saariyay kooxdiisa? – Gool FM
Muxuu ka yiri Mourinho guul daradii xanuunka badnayd ee caawa dhabarka loo saariyay kooxdiisa?
Liibaan Fantastic October 23, 2016
(Manchester) 23 Okt 2016 Tababaraha kooxda Man United ee Jose Mourinho ayaa ka hadlay guul daradii xanuunka badnayd ee caawa ka soo gaartay kooxdiisii hore ee Chelsea.
Mourinho ayaa sheegay in kooxdiisu a samaysay qaladaad difaac oo aad u xun kaas oo keentay in Pedro uu ka dhaliyo goolka hore.
Wuxuuna intaa sii raaciyay in guul daro 1-0 iyo 4-0 ay tahay mid isku mid ah oo labaduba aad luminayso kaliya 3-dhibic.
“Marka lagaaga adkaado 1-0 ama 4-0 waxaad luminaysaa oo kaliya 3-dhibic, 6-dhibic ayaan ka hoosaynaa hogaanka horyaalka, waxaanan u baahanahay inaan bilowno guulo isdaba joog ah” ayuu yiri Mourinho.
“Waxaan abuurnay fursado badan laakiin foojignaanta Courtois aad ayeey u adkayd, wuxuu badbaadiyay kubaddo badan oo kabadan intii uu badbaadiyay De Gea”.
“Hadii aan goolka uga hormari lahayn Chelsea libinta anaga ayaa heli lahayn, xili hore ayeey kooxdu isdhiibtay, marka aad isdhiibto kooxdaaduna ay dunto 25-ka daqiiqo ee ugu horeeya ciyaarta, inta badan waad iswada dhiibaysaa”.
“Kama niyad jabsani qaab ciyaareedka laakiin waxaan ka niyad jabsanahay qaladaadka, qalad aan la qaadan karin oo daqiiqadii ugu horaysay ee ciyaarta ah ayaa badalay habsami u socodkii ciyaarta oo dhan”.
GOOGOOSKA: AS Roma vs US Palermo 4-1 (Roma oo Palermo ruquustay)
GOOGOOSKA: Real Madrid vs Athletic Bilbao 2-1 (Alvaro Morata oo Athletic aamusiyay)